Global Voices teny Malagasy » Firaisankinan’i Pôrtô Rikana, Namiratra ao Anatin’ny Fahatapahan-Jiro Manerana Ny Tangoro-Nosy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Oktobra 2016 7:46 GMT 1	 · Mpanoratra Ángel Carrión Nandika Naomy
Sokajy: Amerika Latina, Karaiba, Pôrtô Rikô (Etazonia), Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Voina
Mpiasa avy ao amin'ny Fahefana misahana ny Herinaratra ao Pôrtô Rikô (PREPA) ao amin'ny toby mpamelona herinaratra Aguirre akaikin'ny morontsiraka atsimo-atsinanan'i Pôrtô Rikô nandritra ny fahatapahan-jiro namely ny nosy rehetra tao Pôrô Rikô tamin'ny Alarobia 21 Septambra. Pikantsary tamin'ny video .
Somary miha-miverina amin'ny laoniny ihany ny toe-draharaha ao Pôrtô Rikô taorian'ny fahatapahan-jiro  tamin'ny tolakandron'ny 21 Septambra izay saika namely ny vondronosy manontolo nandritra ny telo andro, na dia niverina ela kokoa taty aoriana aza izany ho an'ny olona sasany. Na dia ny kaominin'ny nosy ao Vieques sy Culebra kosa aza tsy afa-bela amin'ny fiantraikan'ny fahatapahan-jiro, na apagón amin'ny teny espaniola.
Tombanana ho 1 miliara dolara Amerikana ny fatiantoka ara-toekarena mivantana noho ny fahatapahan-jiro. Nitatitra ny Departemantan'ny Fampianarana fa eo amin'ny 103.941 dolara eo farafahakeliny ny fahaverezana noho ny sakafo simba tamin'ny programan-tsakafo an-tsekolim-panjakana noho ny fahatapahan-jiro. Ary tsy manana fampandehanana herinaratra vonjimaika ny tahirin-drano sasany ao Pôrtô Rikô, tahaka an'i La Plata, ka midika izany fa tokony ho olona 250.000 eo no tsy misy rano.
Tao anatin'ny aizina, nirehitra namirapiratra ny firaisankinan'i Porto Rikana teo amin'ny mpiara-monina.
Nandritra ny fahatapahan-jiro, somary nisosa tsara ihany ny zava-drehetra na dia teo aza ny tsy fisiana saika manontolo amin'ny filàna fototra. Tsy nisy ny fandrobàna ary tsy nisy ny herisetra nandritra ny fahatapahan-jiro. Satria tsy mandeha ny jiron'ny fifamoivoizana, mamitaka ny lalana (jereo ny lahatsary  eto ambany), saingy tsy nisy ny tatitra lozam-pifamoivoizana goavana. Mandamina ny fifamoivoizana kosa ny polisy eny amin'ny sampanan-dalana be mpivezivezy indrindra, ka nahavaha olona be dia be izany.
Nidika ho fahasarotam-piainana ny fahatapahan-jiro ho an'ny Pôrtô Rikana, saingy namoaka ny toetra tsara indrindra teo amin'ny maro izany. Maro ny olona nanana herinaratra vonjimaika na efa niverina ny jirony no nanampy ireo namana sy mpifanolo-borindrina, ary indraindray aza, ho an'ny olon-tsy fantatra mihitsy – mba ahafahan'izy ireo mahandro sakafo, na mamahana ny ventilatera, radio na finday avo lenta mandeha herinaratra. (Mazava ho azy fa tsy manakana ny olona tsy hampiasa media sosialy mba hifandray sy hanaraka akaiky ny fivoaran'ny fepetra raisin'ny fahefana misahana ny herinaratra amin'ny fiverenan'ny jiro ny fahatapahana.)
Tsy nampijanona ny fankalazana ny Grito de Lares  (ny Tomanin'i Lares) tamin'ny 23 Septambra, andro manamarika ny hetsika mpitady fahaleovantenan'i Pôrtô Rikô tamin'ny taonjato faha-19 izay nanomboka ny fikomiana manohitra ny governemanta Espaniola tao amin'ny tanàna tendrombohitr'i Lares tamin'ny taona 1868 ihany koa izany. Tamin'izany fotoana izany, nihay hina niaraka tamin'ny Kiobàna mitolona ho amin'ny fahaleovantenan'izy ireo manokana ireo Pôrtô Rikana mpitolona ho amin'ny fahafahana.
Tsy mbola fantatra ny antony mahatonga ny fahatapahana tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity. Ny fahamaizana tao amin'ny toby mpamelona herinaratra Aguirre eo akaikin'ny morontsiraka atsimo-atsinanan'ny nosy lehibe indrindra ao Pôrtô Rikô no niteraka ny firodanan'ny rafitra manontolo, saingy tsy mbola fantatra izay nahatonga ny afo, hita sary ao amin'ny lahatsary eto ambany:
Ny Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) na ny Fahefana Misahana ny Herinaratra ao Pôrtô Rikô (PREPA amin'ny teny anglisy) ihany no hany manome herinaratra araka izay ilain'i Pôrtô Rikô, orinasam-panjakana voaresaka tamin'ny vaovao tao anatin'ny taona vitsy lasa noho ny trosa eo ho eo amin'ny 9 miliara dolara ezahiny hanaovana fifampiraharahana. Tsy mahagaga fa rehefa avy nandany 43 tapitrisa dolara sahady tamin'ny fanaramàna manam-pahaizana momba ny drafi-famerenana ny trosan'ny orinasam-panjakana ny governemanta, dia mitaky ny fanomezana ny PREPA hotantanin'ny tsy miankina kosa ny sasany, tsy miraharaha ny fiantraikan'izany [fanomezam-pitantana ho an'ny tsy miankina] eo amin'ny firenena izay 40% ny mponina no heverina fa miaina eo amin'ny tokonan'ny fahantrana.
Ny Angovo nohavaozina no nolazaina hatrany fa vahaolana ho an'ny PREPA. Eny tokoa, manana safidy maro i Pôrtô Rikô raha resaka vahaolana hafa amin'ny angovo no resahana. Noho ny toerany ara-jeografia ao Karaiba, afaka mitrandraka tsara ny herin'ny masoandro, rivotra sy ny ranomasina i Pôrtô Rikô mba hanome fahafaham-po amin'ny filàna angovo. Saingy ara-tantara, tsy resy lahatra amin'ny fidirana amin'izany safidy izany ny governemanta, fa misafidy hiantehitra amin'ny solika ho fanomezana fahafaham-po amin'ny tinadin'ny angovo.
Mamely ihany koa ny fahatapahan-jiro tao Pôrtô Rikô, faritany Amerikana manana zon'olom-pirenena voafetra, raha mbola rangitra tamin'ny fanapahan-kevitra vao haingana noraisin'ny governemantan'i Etazonia hampihena ny fizakan-tenany. Ny tena hevi-dehiben'ny apagón dia azo antoka fa voazavan'i Maritza Stanchich, mpampianatra teny Anglisy ao amin'ny Anjerimanontolon'i Pôtô Rikô ao Rio Piedras, izay nanoratra fomba fijery azo tsapain-tanana  tao amin'ny Huffington Post:
Ny fahatapahan-jiro dia midika firodanan'ny Fanjakana Tafaray Tamim-pahalalahana—na “Commonwealth” araka ny fiantsoan'i Pôrtô Rikô azy amin'ny fanalefahan-teny – amin'ny teny azo tsapain-tanana kokoa hoe ireo fotoana nampihovitrovitra ny tany tamin'ny herintaona, anisan'izany ireo didim-pitsarana roa navoakan'ny Fitsarana Tampony Amerikana nanafoana ny lalàmpanorenana sy ny fiandrianampirenen'i Pôrtô Rikô—na naneho azy ho lainga miharihary nahazatra azy hatrizay.
Ny fahatapahan-jiro koa dia manambara ny fiavian'ny tafio-drivotry ny birao manaramaso ny hetra napetraky ny [fanjakana] federaly, naorina ho anisan'ny PROMESA, ilay lalàna Orwellian [mpandrava ny fisokafan'ny fiarahamonina] manana fanafohezan-teny midika hoe “fampanantenana” amin'ny teny Espaniola. Vao nanendry ireo olona ao amin'ny birao fanaraha-maso ny hetra ny Filoha Obama [hampanao ny fitsitsiana ara-toekarena neoliberaly hijery ireo tolobidy fangalaram-bolam-panjakana] sy niteraka fitokonana ara-tsosialy.
Noho ny toe-draharaha ara-toekarena sy ara-politika mampalahelo, mampamirapiratra ny toerana amin'ny fahatsaram-panahy sy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-belona aminy ny Pôrtô Rikana nandritra ny fahatapahan-jiro.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/10/12/89364/
 sakafo simba tamin'ny programan-tsakafo an-tsekolim-panjakana : http://www.miprv.com/perdidas-millonarias-en-comedores-escolares-por-apagon/
 Grito de Lares: https://en.wikipedia.org/wiki/Grito_de_Lares
 Ny fahamaizana tao amin'ny toby mpamelona herinaratra Aguirre : https://www.youtube.com/watch?v=ZLZHGN1RMBM